छालामा एलर्जी हुन्छ ? यसरी बच्न सकिन्छ - Everest Dainik - News from Nepal
छालामा एलर्जी हुन्छ ? यसरी बच्न सकिन्छ
चैत १५ । छालाले शरीरलाई भित्री संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ । छालामा पनि विभिन्न समस्या आउँछन् । सुक्खापन आउने, एलर्जी हुने, चिलाउने र छाला फाट्ने जस्ता समस्या मात्र होइन हाम्रो शरीरको भित्री भागमा हुने कुनै पनि रोगको लक्षण छालामा देखिने गर्छ। छाला चिलाउने र छाला सम्बन्धि समस्यालाई धेरैले सामान्य रुपमा लिने गर्छन् । तर छालामा हुने समस्यालाई हेलचक्र्याइ गरियो भने यसले हाम्रो शरिरमा जटिल समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ।
छालामा हुने मुख्य समस्याहरु
सुक्खापन धेरैको समस्या हो । छालामा विभिन्न कारणले सुक्खापन हुने गर्दछ । यो शरिरमा भएको कुनै रोग, लामो समयसम्म कडा साबुनको प्रयोगका कारणले यो समस्या हुने गर्छ । यो समस्या केहीमा वंशाणुगत पनि हुने गर्छ । उमेरले पनि सुक्खापन ल्याउन सक्छ यसले गर्दा उमेर बढ्दै जादा अनुहारमा चाउरी पर्ने, हात र खुट्टा फाट्ने, छाला खुम्चिने समस्या हुन्छ ।
छालाको रोगसँग लड्ने क्षमता ९इम्युनिटी पावर० मा गढबढी आएमा एलर्जीको समस्या हुन्छ । लामो समयसम्म हातमा घडी, ब्रासलेट, क्यामिकलयुक्त रङ्ग आदीको प्रयोगले छालाको माथिल्लो भागमा असर पार्छ र एलर्जी गराउँछ । सुक्खापन एलर्जीको कारणले पनि हुने गर्दछ ।
छालामा भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगस ९ढुसी०का कारण छालामा संक्रमण हुने गर्छ । यसैगरी लुतो पनि संक्रमणका कारण हुन्छ । छालामा मान्छेबाट मान्छेमा संक्रमण हुने गर्दछ । योसँगै घरपालुवा कुकुर र बिरालोबाट पनि संक्रमण हुन्छ । कुकुर र बिरालोको कुनै–कुनै किटाणु मानिसमा सर्न सक्छ त्यसैगरी कुकुर बिरालोमा हुने रौ‌ र चाया मानिसको छालामा आएमा छालामा संक्रमण फैलिन्छ ।
छालाको रोगका कारण हुने समस्या
लाइकन प्लानसको खास कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । छालाको इम्यूनिटी पावर छालाको कोषसंग जुध्न पुगेमा छालामा समस्या हुन्छ । मेडिकलको भाषामा यसलाई अटो इम्यूनो डिजिज पनि भन्ने गरिन्छ ।
सोरियासिस (कत्ले रोग)
सोरियासिस पनि अटो इम्यूनो डिजिजनै हो । यो धेरैमा हुने समस्या हो । सोरियासिस भएमा सामान्य मानिसको भन्दा चारगुणा बढी बढ्ने हुन्छ । यो सँगै छाला रातो हुने, दाद जस्तो देखिने, सुक्खापन हुने र छालामा कत्ला निस्किने हुन्छ । कत्ला निस्किने भएकालेनै यसलाई नेपालीमा कत्ले रोग भन्ने गरिन्छ । विशेष गरी शरिरको जिनमा गडबढी भएमा यो समस्या हुन्छ । मोटोपन भएका, सुगर र थाइराइड सम्बन्धी समस्या भएकाहरुमा यो समस्या बढी नै देखिन्छ ।
पर्याप्त मात्रामा पानि नपिउँदा पनि छालामा समस्या देखिन्छ । कम पानि पिउने, धेरैबेर घाममा बस्ने गर्नाले छालामा सुक्खापन ल्याउँछ ।
शरीरमा सेतो दुवी वा पोतो आउनुलाई पिग्मेन्ट्री डिस्अडर भनिन्छ । यस्तो समस्या भएकाहरुमा छालाको रङ्गमा फरक आउँछ । कसैमा कालो दाग बस्छ भने कसैमा सेता धब्बा छालामा देखिन्छ ।
क्यान्सर छालामा हुने जटिल समस्या हो । यो दुइ किसिको हुन्छ । बेसल सेल क्यारिनोमा (बिसीसी) र स्क्वामस सेल क्यारिनोमा ९एसीसी० यी दुवै समस्या घामका कारणले गर्दा हुने गर्छन् । अल्ट्राभायोलेट किरणको असरबाट बीसीसी र एससिसी क्यान्सर हुन सक्छ ।
छालाको समस्याबाट बच्ने उपाय
मोइस्चराइजिङ्ग क्रिम, लोसन र तेलको प्रयोगले छालालाई सुक्खापनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
तेल अथवा हातमा क्रिम लगाउनुभन्दा पहिले पानिले हात चिसो बनाएर मात्र प्रयोग गर्ने
कडाखालको साबुनको प्रयोग कम गर्ने
ऊनीको कपडाको प्रयोग नगर्ने, हिटर एसीको लामो समय सम्म प्रयोग नगर्ने
पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने, पर्याप्त मात्रामा फलफूल, सागसब्जीको प्रयोग गर्ने
घाममा निस्किदा सनस्क्रिम र मोस्चराइजिङ क्रिमको प्रयोग गर्ने
छाला रोग विशेषज्ञ डा. सुशील पौडेलबाट
ट्याग्स: skin allerji